Lords: 7 December 2017
Volume 787: debated on Thursday 7 December 2017
I am glad that the Commonwealth has already indicated that Zimbabwe will be welcomed back after 15 years of absence, provided it applies to join and demonstrates in due course its commitment to the principles of the Commonwealth. The Commonwealth Local Government Forum still maintains a useful link with Zimbabwe by working for participatory democracy at both the urban and rural levels. The new Government of Zimbabwe should be reminded that in 1991 the Commonwealth Heads of Government Meeting was held in Harare, at which all members, including Zimbabwe, recommitted themselves to the principles of democracy, the rule of law, a free press and freedom of speech. Now it needs only to abide by the Harare declaration to be welcomed back into the Commonwealth. Do the Government support Commonwealth ambitions to welcome Zimbabwe back into the association once the criteria are satisfied?
Where the Zimbabwe Government have done so little to help victims, we have stepped in. We have already worked alongside Sweden, for example, to provide support for medical, legal and psychosocial services to survivors at Gwanda hospital in Matabeleland South province. I look forward to hearing from the Minister how we will do so much more to use our Engaging Africa policy to enable Zimbabwe to build a prosperous future in the interests of all its people.